Kufamba Kwakachengeteka Kwevashandisi Vemacheya - Karman Healthcare
Kufamba Kwakachengeteka kweVashandisi veWiricheya
Makore matanhatu apfuura, murume ane makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa kubva kuMichigan, akatambira nhepfenyuro yenyika nekupunyuka tsaona yemumugwagwa, apo simba rake wiricheya ndakamanikidzwa kumberi kwetemu-rori. Akapona pachiitiko ichi asi akamutsa mubvunzo kuvanhu vazhinji, vari wiricheya vashandisi vanofamba vakachengeteka mumotokari yavo?
Mamirioni avanhu vanosara mune yavo mavhiripu pavanenge vachifamba mumotokari, vakatarisana nehuwandu hwakawanda hwekuchengetedza njodzi zuva nezuva, kunyangwe kana vasingakwanise kufukidzwa nenhau dzenyika senge muenzaniso uri pamusoro. Mukuru wiricheya vashandisi vanogona chinja zvakachengeteka kubva kwavari mavhiripu kuzvigaro zvavo zvemotokari zvinofanirwa kudaro. Nekudaro, gara uchiyeuka kushandisa federally yakarongedzwa mabhandi epachigaro anopiwa nemugadziri wemotokari, kudzikisa njodzi dzekuchengetedza.
Kune avo vanofanirwa kugara mune yavo mavhiripu panguva yerwendo, ita shuwa kuti une tsaona yakaedzwa wiricheya. Izvi zvinosanganisira kuve neakakosha Hardware yekubatanidza wiricheya kune hoko dzakasungirirwa. Aya mhando of mavhiripu ichave nechisimba chinoratidza kuti vanoteerera RESNA WC19, kana yakaenzana yeEurope, ISO 7176/19. Izvi mhando yekuyedza kubhuroka ndeyekuzvidira kune vagadziri kuti vashandise kusimbisa chigadzirwa chavo chemotokari kutakura.
Vana vanogona kuchinjira kunze kwavo mavhiripu inofanirwa kushandisa yakatenderwa uye yakaedzwa zvigaro zvekuchengetedza vana, kana mabhandi ekumisikidza mabhandi. Zvimwe zvigaro zvekuchengetedza vana zviripo izvo zvinosanganisira mashanu-poindi harness kudzora kwevana vanorema kusvika makumi mapaundi.
Karman Healthcare Inoshanda Wiricheya Tsaona Kwayedza - Kubudirira
Yakundikana kuputsika bvunzo ye wiricheya nebhanhire rechigaro risina kuiswa
Rimwe Wiricheya Travel Zviwanikwa
Kufamba Zvakachengeteka - Tasva Safe.pdf
Yunivhesiti yeMichigan - Yekufambisa Yekutsvagisa Institute
Chikoro Bhazi Fleet - Ita uye Usingaite YeWiricheya Kufamba
Nzvimbo dzeObamacare dzinodhura kupfuura ese mawebhusaiti enhau akabatanidzwa
Kudzoka muna 2005: Mai Wheelchair vanogona kumira, kubviswa zita ravo